Xisbi ka bax midkale ku biir waxay la midtahay geel ka tag midkale raac,waxad korodhsatay hashaa magaceed.w/q/ xuseen waraabe. 0 August 02, 2015 in Articles by somalilandlive Staff Visits: 2296
Xisbi ka bax midkale ku biir waxay la midtahay geel ka tag midkale raac,waxad korodhsatay hashaa magaceed.w/q/ xuseen waraabe. waayo hore waxa jiri jiray dad caydh ahaa.waagaas ma jirin magaalo iyo meel kale oo uu shaqo qofku ka raadsado aan ahayn inuu geel qofkale leeyahay raaco si uu ugu noolaado caanihiisa mushqaayadna waxa u ahayd sanadkii in hal neef oo geel ah la siiyo. Nin ka mid ahaa dadkaasi waayuhu ku qasbeen inuu geel ka xidhaale qaato aya nin ay isku fiicnayeen u soo bandhigay inuu geelan iskaga tago mid kalena raaco.Geel ka tag midkalena
raac waxad kordhisay hashaas magaceed ayuu ugu warceliyay. waxay noqotay murti ilaa imika la adeegsado marka laba waxyaabood oo isku mid ah qofka la dooransiiyo.Maanta waxa taas la mid ah sheekadana aynu u soo
qaadanay wax xisbiyo loola baxay hase yeeshee aan ka duwanayn geelashaas ay rag foofsadeen. Waxaynu marag kanahay subax noolba inay dad ka baxaan xisbiyo ku sheegyada iyagoo ku sababaynaya inay uga baxeen
reer kaliya oo dadkii kale ka yeeshay.Run ahaan wax way ka jiraan arinkaas waayo xisbigan qof ayaa iska leh oo maalkiisa gashaday. Dhaqankeena dhigaya waxad leedahay in tolkaana kula leeyahay waa muran ma doon,dhaqankeenu ma ogola in wax la wada yeesho qaran ahaan. qaranimo
dhaqankeena kuma jirto, bal u fiirso siday u dayacanyihiin dhakhtaradeenu iskuuladeenu wadooyinkeenu, gaajada iyo darxumada askarteena ka muuqata waxaas oo dhan waxa u sabab ah qaab u fikirkeena iyo dhaqankeena oon ogolayn ilaalinta iyo daryeelka danaha guud ee ummadu wadaagto. Qofka Slander ahi wuxu ilaaliya oo u soo jeeda wixii uu
leeyahay waxau soo raaca wixii reerkooda ku magacaaban haday wasaarad tahay haday bakhaar tahay haday xisbi tahay. Waxa loo baahanyahay in qofka Slander ahi hantiga uu gaarka u leeyahay iyo hantiga ummadu wada leedahay u lexejecleeyo si isku mid ah waayo caafimad kama maarantid waxbarasho kama maarantid wado aad marto kama maarantid, kaligaa waxaas oo dhan ma samayn kartid hadii aan dadwaynhu u midoobin maal iyo maskaxba. Nuxurka meesha ku jiraa waxa weeye sadex arimood kaliya aya la
gudboon qofka inuu ka shaqeeyo,,1- ilaahiisa uu caabudo diintiisa ku dhaqmo
qarankiisa. waa waajib ku saaran inaad gudato wixii kaala gudboon qarankaaga, waxa ugu yar ee aad ku biirin kartaa waa jidka umadu marto aad ka qaadid qodax ama dhagax xashiish wixii umada maraysa dhib ku ah.
Hadii aynu sidaas dhaqan ka dhigano waa hubaal inaynu ka bixi doono tiiha iyo gaajada cudurka bi idmilaah No Comments yet... Print